7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Soomaliya
/blog/Gallery/7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa -Phenylpiracet
Posted on 09 / 12 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Phenylpiracetam waa nooc ka mid ah xayawaanka phenyl ee piracetam nootropic nootropic. Waxay kordhisaa waxqabadka muuqaalka ah waxayna kor u qaadeysaa heerka dulqaadka dulqaadka ah ee ka yimaada hargabka iyo walbahaarka. Cilmi-baarista xayawaanku waxay soo jeedisay antiamnesic, antidepressant, anticonvulsant, antipsychotic, saameynta xasuusta iyo xasuusta. Waxaa loo tixgeliyaa naqshadeeyaha naqshadeeyaha waxaana ku yaal liiska doping. Waxaa lagu hormariyay 1980s-ka Ruushka ee laga yaabo inuu isticmaalo militariga iyo ciyaaraha.
Qalabka kiimikada ee Phenylpiracetam
Phenylpiracetam magacyo kale
• (RS) -2- (4-phenyl-2-oxopyrrolidine-1-yl) acetamide
• (±) -2- (4-phenyl-2-oxopyrrolidine-1-yl) acetamide
Caanaha naasku waa C 12 H 14 N 2 O 2
Aqoonsiga dibadda / database-yada
Lambarka CAS 77472-70-9
MOSAALKA MAGAALADA 218.26 g · mole-1
Qaaciddada qaabdhismeedka dhismaha waxay leedahay laba isomar: S iyo R. Labaduba waxay saameyn togan ku leeyihiin maskaxda sida daawada murugada. Si kastaba ha noqotee, R-isomer wuu ka xoog badan yahay, maaddaama, ka soo horjeedka 'S-form', uu intaa sii dheer u saameynayo howlaha sida xusuusta iyo hadalka. Waxay kicineysaa isku xirnaanta neerfaha maskaxda, waxay kobcineysaa isku-darka RNA, waxay bixisaa bixinta ugu fiican ee dhiigga. Waxa kale oo jira nooc saddexaad oo ah phenylpyrazetam (phenotropil) - SR. Waa isku-dhaf isir ah oo labada isomer ah, oo isku darsamaya sifooyinkooda. Waqtigan xaadirka ah, R-isomer-ka saafiga ah ee daroogada lama heli karo iib ahaan. Sidaa darteed, taxaddar haddii aad iibsatay phenylpyricetam waxay yeelan doontaa saameyn daciif ah. Haddii qiyaasta ay ku filan tahay, markaa tani waa qaabka S ee dhismaha. Wax soo saarkeenu wuxuu ka kooban yahay foomka SR, wuxuuna leeyahay dhammaan faa'iidooyinka daroogada.
Fenylpiracetam Sharaxa Guud
Waxaa loo adeegsaday bini'aadamka sida kicinta CNS, nidaamka lafdhabarta, waxqabadka isboortiga iyo sida wax aan loo baahneyn, taas oo dhacda 30-60 waqtiyo ka xoog badan piracetam. Daraasaadka xayawaanku waxay muujinayaan antiamnestic, antidepressant, anticonvulsant, antipsychotic, anxiolytic iyo waxqabadka xoojinta xasuusta.
Daawada Carphedon Pharmacology
Daraasado kiliinikaro yar oo yar ayaa muujiyay ururada suuragalka ah ee u dhexeeya daawooyinka loo yaqaan 'carphedone' iyo qurxinta xaaladaha qaarkood ee encephalopathic, sida dhaawacyada xididdada dhiigga ee maskaxda, jahwareerka craniocerebral iyo noocyada qaarkood ee glioma.
Waxay ka beddelaysaa tallaabada niyadjabsan ee dareenka yaraanta ee benzodiazepine, wuxuu hagaajiyaa habdhaqanka hawlaha, wuxuu yareynayaa xstagagmus ka dib, wuxuu ka ilaaliyaa amniyeynta retrograde, wuxuuna leeyahay hanti anticonvulsant.
Laga yaabee, phenylpyracetam waxaa loogu yeeri karaa mid kamid ah daawooyinka nootropic ugu awooda badan waqtigeena. Waxaa loo abuuray si sax ah saameyn xoog leh oo ku saabsan cudurrada halista ah ee la xiriira cilladaha xusuusta, hadalka, ama isku-dubaridka dhaqdhaqaaqa. Phenylpyracetam waa marar badan caanaha la kordhiyay, oo loo yaqaan tan iyo wakhtigii Midowgii Soofiyeeti walxaha loo yaqaan "pyracetam." Ku darista koox fenyl waxay gacan ka gaysatay hagaajinta farmasokokinetiga ee daroogada (tusaale ahaan, ka sii darid aad u muuqato iyada oo la marayo xayndaabka maskaxda-dhiigga), taas oo ka dhigaysa mid awood badan oo dhaqso leh.
Budada Phenylpiracetam Faa'iidooyinka iyo qiyaasaha
Phenotryrazetam (phenylpyrazetam) ee kaabsoolka ayaa leh talaabadan soo socota:
• wuxuu xoojiyaa dhaqdhaqaaqa maskaxda;
• Waxay hagaajisaa shaqooyinka garashada;
• Dheegaa habka isu gudbinta dareen-celinta dareenka ee habka dhexe ee dareemayaasha;
• waxay kordhisaa waxqabadka jirka;
• waxay hagaajineysaa niyadda;
• waxay kordhisaa iska caabinta walwalka;
• Waxay kicinaysaa difaac;
• waxay hagaajinaysaa aragga indhaha iyo wareegga dhiigga (gaar ahaan addinka);
• wuxuu leeyahay saameyn liddi ku ah bararka iyo xanuunka iyo kuwa kale.
Qiyaasta walaxda waxay ku kala duwan tahay 100 ilaa millatariga 250 maalinkiiba bil gudaheed, ka dib marka fasax loogu talagalay maalmaha 30 waa in la sameeyaa. Phenylpyracetam ma keento calaamadaha walxaha iyo cirbadaha.
Budada Phenylpiracetam - Dhibaatooyinka ay keento iyo iska horkeenka
Waxyeelooyinka daaweynta waxaa lagu tilmaami karaa xanaaq maskaxeed oo adag. Waxaa jiri kara hurdo la'aan haddii aad qaadato walax ka dib saacadda XNUM, sidaas darteed waa in subaxda la cabbo. Dadka u nugul cadaadiska dhiigga oo sareeya, waxay si weyn u kordhi karaan, sidaa daraadeed kiiskan, waa in aad qaadataa walaxda taxadir leh. Khilaafka ugu weyn ee isticmaalka walaxda waa dulqaad shakhsi ah.
Faahfaahinta ku saabsan Phenylpiracetam
Faahfaahinta ku saabsan koodhka phenotropil (phenylpyrazetam) waa khiyaano. Guud ahaan, dadka qaata daawada waxay dareemeen kor u kaca tamar, isugeyn, hurdo la hagaajiyay, xasuusta iyo niyadda, korodhka xoogga leh. Dadka qaar, si kastaba ha ahaatee, waxay sheegteen inay ka adkaadeen dareenka lumis iyo daciifnimo. Waa in maskaxda lagu hayaa in falcelinta noocan oo kale ah ay ka timaaddo daal aad u daran, diiqad iyo daal maskaxeed. Laguma talinayo in aad qaadato fenylpyracetam adigoon magacaabin dhakhtar.
Fenilpiracetam miyay waxtar leedahay?
Haddii daroogadu ku liis gareyso liisaska doping, waa mid caqli gal ah in la qaato in ay waxtar leedahay. Kaliya halkan waa wax ku ool ah muddo cayiman. Haa, waad sii badin doontaa. Iyo maxaa dhacaya ka dib maalmaha 2? Qeybta hoose ayaa ah in tamarta iyo waxqabadka lagu darey sida caadiga ah ee nootropil, haddii aan dhihi karo sidaas. Iyo nootropil (taas oo ah, piracetam) waxay bilaabeysaa inay wax ka qabato wakhti 2. Waxaa soo baxday in saameynta qaadashada phenotropil, waxaan loola jeednaa saameynta dhabta ah ee nootropic, bilaabi doonaa maalmood 14. Laakiin isaga waxaad heli doontaa lacagta 2-toddobaadkii ee vivacity. Si kastaba ha ahaatee, dulqaadka, daroogada loo isticmaalo daroogada (kooxda phenyl phenylene) ayaa la horumariyaa, sidaas darteed isticmaalka muddada-dheer waa wax aan macno lahayn.
Phenylpiracetam (Carphedon) budada Qiyaasta, amniga, inta cabbitaanka la cabbo.
Waxaan aaminsanahay in si kasta oo laguugu sheego in "daroogadu gabi ahaanba amaan tahay," kuma talineyno in la isticmaalo in ka badan 3 toddobaad, aad ayey kuu daalaysaa sababtoo ah neurotransmitters-ka ku shaqeeya xawaare sare. Xaqiiqdii, fekerkeenna, waxaa ugu wanaagsan in loo isticmaalo episodically phenotropic episodically, ama koorsooyin 2-3 toddobaad ah loona daaweeyo sidii "Turbo Mode".
Si loo gaaro ficilka nootropic, sida horey loogu soo sheegey, waxaa lagama maarmaan ah in la cabbo ugu yaraan toddobaadyada 2 ee kor ku xusan. Baakada waxaad ku arki doontaa in bilaha 3 la qaado, clevermind.ru waxay tixgelisaa, gaar ahaan, dhaqdhaqaaq ganacsi, maaddaama qiimaha mucjisadani ay ku saabsan tahay 800 RUB (dhamaadka 2014). Sidaas darteed, soo dhaweynta toddobaadyada 3:
Waxaa si tijaabo ah loo cadeeyay in culeyska qofka uu door muhiim ah ka ciyaarayo haddii aad ka yar tahay 70 kg: 1 kaniini ah (100 mg) subax kasta, haddii aysan wax saameyn ah lahayn, ka dib ku dar mid kale, ama isku mar, ama 2-3 saacadood .
Waxaad ka badan tahay 70 kg: ka bilaw 1st, ka dibna waxaad u badan tahay inaad u wareegto 2 ama 3 maalintii.
Budada Carphedon Mudo intee le'eg ayay qaadataa in la isticmaalo?
Daroogadu waxay leeyihiin falalka 2 ee ku saabsan xaddiga dhacdada:
1. 5-6 saacadood gudahood. Midabbada ayaa ka ifaya, tamar, fiirsasho. Ma jiro raynrayn, waxaad dareemi doontaa ururinta iyo go'aanka, laakiin waxaad taas fahmi doontaa oo keliya marka saameynta daawadu dhammaato. Waqtiga u dhexeeya “fikirka-la-qabanayo” ayaa si muuqata loo soo gaabiyey, xilligan la joogo waxaa ugu fiican inaadan khaladaad sameyn. Hadalku wuxuu noqdaa mid deg deg ah, waxaan doonayaa inaan wax walba ka hadlo, laakiin haddii aysan jirin dhego dheeri ah, ka dib aqri, qor, barnaamij, ugu dambeyn. Saameyn kale oo aad u xiiso badan - Waxaan rabaa in qof walba uu si dhaqso leh ula hadlo ama aad buugaagta u aqriso si dhaqso leh oo aad u cunto ereyo. Ciyaartooyda sidoo kale way faraxsan yihiin.
2. 10-14 maalmood gudahood. Xusuusta iyo caqliga waxyar ayaa laga hagaajiyay, sida kiiska nootropics-ka caadiga ah. Riyooyin BHD FullHD ah ayaa lagaa saarayaa, sidaa darteed waxaad ku tababbaran kartaa "riyooyin hagitaan ah".
Goorma ay sugaan saameynta?
20-60 daqiiqo kadib, waxay kuxirantahay dheef-shiid kiimikaad (metabolism). Saamaynta nootropic - 10-14 maalmood kadib.
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa ee Armodafinil	Su'aalaha 8 si aad is-weydiiso ka hor intaadan qaadan budada Cetilistat